I-MovidaInn Aruba- APT POOL BUKA eceleni kwePalm Beach - I-Airbnb
I-MovidaInn Aruba- APT POOL BUKA eceleni kwePalm Beach
Noord, Not Applicable, i-Aruba
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Livia
U-Livia Ungumbungazi ovelele
I-Movida Inn Aruba isanda kulungiswa ngesitayela sase-Caribbean, sesimanjemanje, enezikhala ezinkulu zangaphandle nezasendlini ezinakekelwa kahle ukunikeza izivakashi zethu ukunethezeka okukhulu. Isakhiwo se-boutique sinezindlu ezi-4 ezizimele futhi sinedamu lokubhukuda likasawoti / elakhiwe nge-chlorine eline-hydromassage ene-solarium. Wonke amafulethi anomnyango ozimele, i-BBQ yangasese enetafula langaphandle nezihlalo. Indawo yokupaka mahhala ngaphambi kwesakhiwo sodonga.
Sizoba onawo nganoma yisiphi iseluleko nolwazi.
Ifulethi le-POOL VIEW elingu-46 m2, likhanyayo, libanzi, lizimele futhi lihlome ngakho konke ukunethezeka, elinikezwe yonke imininingwane.
I-air conditioning, igumbi lokugezela elikhulu elinefasitela, amanzi ashisayo eshaweni kuphela, igumbi lokulala elinefasitela, umbhede olingana nenkosi nomatilasi bamathambo, 50-intshi i-Smart HD TV nekhishi elihlome ngokuphelele, i-Wi-Fi yamahhala
AKUKHO AMANZI OKUSHISAYO EKHISHINI
~ Umshini wekhofi waseMelika
~ umshini wekhofi we-moka
~ Isiqandisi nesiqandisi
~ isitsha segesi
~ amapuleti ama-3, izibuko ezi-3, izinkomishi ezi-3 nezinto zokusika ezi-3 kuphela kubantu abangu-3
~ 3 izingilazi zewayini
~ itafula, izihlalo ezi-3 nosofa
~ igumbi lokulala elinefasitela
~ Umbhede osayizi wenkosi
- I-Premium King Mattress
~ I-LED SMART TV eneziteshi zesathelayithi ezingamayintshi angu-50
~ amashidi, ingubo yokulala kanye neduvethi
~ Amasokhethi e-USB eduze kombhede
~ ikhabethe lezingubo
~ mnyama amakhethini
~ igumbi lokugezela elinefasitela
~ ikhithi eyamukelekile
~ amathawula okugeza
~ Ishawa ENKULU ngamanzi ashisayo
~ osinki abaphindwe kabili Awekho AMANZI ASHISAYO
~ umshini wokomisa izinwele
I-Movida Inn Aruba isendaweni yaseNoord eqhele ngamamitha angu-400 ukusuka ogwini oluhle lwasePalm Beach, imizuzu engu-8 ngemoto uzofika ogwini oluhle lwase-Eagle Beach futhi ngamakhilomitha angu-2 kuphela uzothola iPalm Beach Plaza Mall lapho ungathenga khona. futhi uthole lonke uhlobo lwezindawo zokudlela i-Joe's Restaurant, indawo yokudlela yaseKalin nezinye eziningi, 3 km kude uzothola i-Tierra del sole-hole Golf Course, eduze kakhulu nathi uzothola i-Fisherman Huts isikhala sabathandi be-Kite surfing kanye nokuntweza emoyeni.
I-Movida Inn Aruba isanda kulungiswa ngesitayela sase-Caribbean, yesimanjemanje, enezikhala ezingaphandle ezinkulu kanye nengaphakathi eligcinwe kahle ukunikeza izivakashi zethu ukunethezeka okukhulu. Indawo inedamu lokubhukuda elinosawoti / eline-chlorine eline-whirlpool ene-solarium. Wonke amafulethi anomnyango ozimele, i-BBQ yangasese enetafula nezihlalo. Sizoba onawo nganoma yisiphi iseluleko nolwazi. I-Movida Inn Aruba isendaweni yaseNoord eqhele ngamamitha angu-400 ukusuka ePalm Beach enhle, imizuzu engu-8 ngemoto uzofika e-Eagle Beach enhle futhi ngamakhilomitha angu-2 kuphela uzothola iPalm Beach Plaza Mall lapho ungathenga khona futhi uthole zonke izinhlobo. izindawo zokudlela e-Joe's Restaurant, indawo yokudlela yaseKalin nezinye eziningi, 3 km uzothola i-Tierra del sole-hole Golf Course, eduze kakhulu nathi uzothola i-Fisherman Huts isikhala sabathandi be-Kite surfing kanye nokuntweza emoyeni.
I-Movida Inn Aruba isanda kulungiswa ngesitayela sase-Caribbean, yesimanjemanje, enezikhala ezingaphandle ezinkulu kanye nengaphakathi eligcinwe kahle ukunikeza izivakashi zethu uk…
ULivia Ungumbungazi ovelele